Ndị na-emepụta ihe na ndị na-eweta ihe ịsa ahụ nke China - Huanyu Sanitary Ware
Home > Ngwaahịa > Ntọala ịsa ahụ
Ntọala ịsa ahụ Ndị nrụpụta
Ningbo Huanyu Sanitary Ware Limited, a elu ọkachamara emeputa & Exporter na China na kemgbe na plastic ahịrị n'ihi na ihe karịrị 20 afọ na na sanitary ware ụlọ ọrụ ihe karịrị 10 afọ, Ọzọkwa. anyị ejirila usoro njikwa njikwa mma ISO 9002S na mbụ nke 1999. anyị na-arụpụta ngwaahịa ya niile na China. Ngwaahịa anyị bụ ahịrị ịdị ọcha nke ngwaahịa anyị gụnyere dị ka ndị a: Isi ịsa ahụ, aka ịsa ahụ, ụgbọ okporo ígwè mmịfe, ihe na-eji mmiri ịsa ahụ, mmiri ịsa ahụ, ihe ịsa ahụ, braket mgbidi ịsa ahụ, ngwa ịsa ahụ, Bidet ịsa ahụ, ngwa ịsa ahụ & ngwa ime ụlọ yana ịzụ ahịa na ngwaahịa ịdị ọcha ndị ọzọ. na weebụsaịtị nke emere na China.
Ntọala ịsa ahụ nwere ngwaahịa kachasị na nhazi ahụ. Ọ nwere ngwaahịa anyị niile bụ isi, ịsa aka, ịsa ahụ n'elu, sọks ịsa ahụ, shataf, faucets, na braket ịsa ahụ. Mgbe ndị ahịa na-achọ ụlọ ọhụrụ, ha nwere ike zụta setịpụ ịsa ahụ ozugbo. Ọ dị mma nke ukwuu, ụdị na àgwà niile ga-adaba nke ọma. N'ezie, ndị ahịa nwekwara ike dakọtara ụdị dị iche iche dịka mmasị nke aka ha si dị.
Anyị nwere ikike siri ike ịmepụta ọtụtụ ụdị ịsa ahụ ọhụrụ setịpụrụ na nha dị iche iche na nkọwapụta maka ndị okenye ndị ahịa anyị nhọrọ dị iche iche dị iche iche chọrọ. A na-ekwe nkwa ịdị elu nke ngwaahịa site na teknụzụ dị elu, akụrụngwa ọgbara ọhụrụ, na njikwa mma na ọkwa mmepụta ọ bụla. Site n'ọhụụ njikwa anyị na ọganihu na-aga n'ihu, ngwaahịa ndị ahụ na-ere nke ọma n'ahịa ụwa, nke nwetara aha ọma. Azụmahịa anyị pụrụ iche na R&D, OEM, ODM.
Nkwụnye mkpanaka okirikiri ịsa ahụ
Obere mkpanaka ịsa ahụ okirikiri a na-emegharị emegharị, setịpụ ịsa ahụ na-agụnye eriri mmiri, yana ngwa niile enwere ike dakọtara na ọchịchọ.
Ntọala ịsa ahụ akụ
Ụfọdụ ngwaahịa nke Simple ịsa set bụ nnọọ kpochapụwo. Economic Shower Set anọwo na ahịa ihe karịrị afọ 10, mana ha ka na-ewu ewu.
Ntọala ịsa ahụ dị mfe
Ntọala ịsa ahụ dị mfe, ihe nkwado mgbidi square na-eweta mmetụta pụrụ iche na kọlụm ịsa ahụ gburugburu. Ntọala ịsa ahụ kpochapụwo nke ukwuu, ma n'usoro nke ụdị na ịdị mma, na-asọmpi
Omuma Electroplating ịsa ahụ Set
The Classic electroplating ịsa ahụ set bụ nnọọ pụrụ iche. Igwe ịsa ahụ dị inch 8 dabara na ịsa ahụ aka cylindrical.
Zụrụ ngwaahịa sitere na ụlọ ọrụ anyị a na-akpọ Huanyu Sanitary Ware bụ otu n'ime ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebuga Ntọala ịsa ahụ na china. Ogo anyị dị elu Ntọala ịsa ahụ na-ewu ewu na ndị chọrọ inweta ngwa ahịa dị ọnụ ala. Anyị nwere ọtụtụ ngwaahịa iji nye ọrụ n'ogbe. Ị nwere ike ijide n'aka ịzụta ọnụ ala dị ala site na ụlọ ọrụ anyị.